मासुमा भिटामिन ए, भिटामिन बी र भिटामिन डी , आइरन, जिंक, पोटासियम लगायतका पौष्टिक तत्व हुनेहुँदा यसको सेवनले शरिरलाई आवश्यक प्रशस्त प्रोटिनको मात्रा प्राप्त गर्न सकिन्छ। विभिन्न सोध अनुसार किशोरावस्थामा कुखुराको मासुको निरन्तर सेवन गर्ने मानिसमा ‘कोलोरेक्टल’ क्यान्सरको जोखिम कम हुने गर्छ।त्यस्तै स्वस्थ मासु खाँदा शरिरमा स्फुर्ती आउँछ। तर सही
स्वस्थ रहन अण्डाकाे सेवन
अण्डा प्रोटिनको स्रोत हो । अण्डा हाम्रो शरीरको लागि अति आवश्यक छ । हाम्रो शरीरलाई मौसम अनुसारको खानेकुरा परिवर्तन गर्न पनि ठिक हो ।अण्डाले गर्मी हुने हुँदा गर्मीमा यसको खाँदा स्वास्थ्य खराब हुन्छ । तर तपाई यस्तै सोच्दै हुनुहुन्छ भने आजा हामी तपाईलाई यसको सत्यबारे बताउँछौ । अण्डामा धेरै पाष्टिक तत्व
मिठो हुने रातो रङको अनारको दाना या जुस सबैले मन पराउछन् । अनार स्वाथ्यको लागि निकै हितकर मानिन्छ । बिरामीहरुलाई अनार बढि खान दिईन्छ । यसले इनर्जी दिने हुँदा असक्त तथा बिरामीहरुलाई दिईएको हो । अनारमा भिटामिन , मिनीरल्स जस्ता तत्वहरु हुन्छ ।अनारको जुसले कलेजोको रक्षा मात्र गर्दैन मदिरा वा
हाम्रो शरीरको सबैभन्दा ठुलो अंग छाला हो । शरीरको रक्त प्रणालीले छालामा प्रयोग हुने सबै चिजलाई सोस्दछ । छालामा प्रयोग गरिने सौन्दर्य प्रशाधनमा पनि विभिन्न किसिमका रसायनहरुको प्रयोग गरिएको हुन्छ । जसले हाम्रो स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पुग्न सक्दछ । यसका साथै छालाको क्यान्सर जस्तो खतरनाक रोग पनि लाग्न सक्ने हुन्छ
पिनास के हाे ? लक्षण तथा जाेगिने उपायहरू
पिनास नाकको भित्र दायाँबायाँ रहने खाली ठाउँमा अवरोधका कारण हुने रोग हो। हाम्रो समाजमा पिनास हुनासाथ झारफुक गर्नुमा ज्यादा विश्वास गरिन्छ । अस्पतालमा आउने विरामीमध्ये कतिपयहरू झारफुकबाट निको नभएपछि आउनेहरू छन् नाकमा जे समस्या भएपनि पिनास भन्ने चलन छ । कतिपय रोगहरू निश्चित समयपछि आफै निको हुन्छ । विरामीहरू अात्तिएर
यसरी १५ मिनेटमै हटाउनुस् अनुहारको रौं सधैँका लागि, मात्र यी ३ घरेलु सामाग्रीको प्रयोगबाट धेरैजसो महिलाहरु शरीरमा आउने अनावश्यक रौं हटाउनको लागि विभिन्न किसीमका विधिहरुलाई अपनाउने गर्दछन् । अनुहारमा आउने रौंहरु नाङ्गो आँखाले देख्ने हुदाँ यसले अनुहारको सौन्दर्यतामा समेत कमी ल्याउँदछ । त्यसैले महिलाहरु यस समस्यालाई सकेसम्म चाडैं हटाउने कोशिसमा
के हाे पायल्स राेग, पायल्समा के खाने, के नखाने जानी राखाैँ……. पायल्स भएर आत्तिनु भएको छ ? यसरी गर्न सकिन्छ समाधान
दिसा गर्दा रगत आउँछ, मासु पलाएको छ, दुख्छ, फाटेको, फुलेको या सुन्निएको छ, मलद्वार चिलाउँछ लगायतका समस्या आम मानिसमा सुनिन्छ । कसैको त पीप बग्छ, अंगुरका झुप्पाजस्तो पलाएको छ, रातो डल्लो छ भन्ने सुनिन्छ । यही रोग नै पायल्स हो । कसैलाई यो रोग लाग्दा रगत आउछ भने कसैलाई आउदैन